Orylọ ọrụ medal - Ndị na-emepụta ihe na ndị na-eweta ihe nrite China
Ezi rụzuru kwesịrị inye otuto kwesịrị ha. Ngwongwo enamel enyo nke bespoke anyị na-ekwu nke ukwuu karịa ihe a na-emepụta, na-abụghị ndị ọzọ.
Tinye imewe nke gị, usoro ọgụgụ na ederede ncheta na nrite iji hụ na nke ọ bụla ka bụ onyinye pụrụ iche pụrụ iche.
Dị ọ bụla udi, size ma ọ bụ imewe na nhọrọ loop fixing maka olu eriri, na ọlaedo, ọlaọcha na ọla kọpa risịrị.
Ọla bụ a fun ụzọ ụgwọ ọrụ agụmakwụkwọ rụzuru. Anyị na-ebu akara nrite zuru ezu nke ihe nrite a na-ahụ anya nke ga-eweta nnukwu ụgwọ ọrụ maka ụmụ akwụkwọ gị n'afọ a. Ekele ha site n’ọrụ ha mere nke ọma na nsụpe, ma ọ bụ zipụ ha ụdị na mpako maka ngụsị akwụkwọ. Anyị na-ebu nrite ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ agụmakwụkwọ ọ bụla.
Okpueze okpueze bu onye emeputara otutu ihe omuma nke America. Ma i choro otu mmata ihe mmata, ihe omuma, ihe omuma, ma obu ihe ndi ozo, onyinye mmata anyi na-abia ngwa ngwa na 100% ojuju ndi ahia.
Imeri emume na sandlot kwesịrị nrite kachasị elu. Nhọrọ anyị nke bọọlụ baseball bụ ụzọ dị mma iji mee ememme ụlọ ndị ahụ! E nwere ọtụtụ ekwekọghị na nha, ihe dabara ọ bụla uto na mmefu ego. Ngwurugwu ọ bụla dị mfe iji hazie nnukwu nhọrọ nke eriri rịbọnụ a họọrọ ịhọrọ na, maka obere ntakịrị, ihe osise ahaziri iche na azụ! Dị ka oge niile, nrite anyị na-abịa site na mbufe ngwa ngwa na afọ ojuju ndị ahịa 100%.
Usọrọ mmeri na basketball ogige na a nrite site Kingtai! Anyị na-enye ọtụtụ nrite n'ụdị dị iche iche, nha na agba, ha niile edoziri. Ngwurugwu ọ bụla na-abịa na nnukwu nhọrọ nke eriri rịbọnụ ejikọtara na, maka ntakịrị ntakịrị, ihe osise ahaziri iche na azụ. Site na nrite dị elu dị oke ọnụ ahịa dị otú ahụ, ebufe ngwa ngwa na 100% afọ ojuju ndị ahịa, ọ bụ slam dunk!
Emere na USA, igwe 500 anyị bụ nke kachasị mma. A na-eme nke ọ bụla site na ọla kọpa siri ike (ihe ochie ọla edo), nickel siri ike (ọlaọcha ochie) ma ọ bụ ọla kọpa siri ike. Atụ 2 ″ na dayameta na .102 (10 guage) oké, ndị a Ọla bụ a ukwuu ọkachamara na-achọ medallion na nwere nnọọ arọ na “ọkpụrụkpụ” na-eche ha. Ihe ngosi azuma ama nke ọla edo ndị a zuru oke maka nhọrọ micro-mkpa laser kanye mkpado dị na ...
Ọla nchara ịnyịnya ígwè medal kpakpando na ụkpụrụ gburugburu, zuru ezu na a 1 "ugwu igwe kwụ otu ebe center diski. Jikoro 50mm na dayameta na-abịa na akaghị maka n'itinye medal mpe mpe akwa. Kwesịrị ekwesị maka ahaziri osise na agbara nke nrite ..
Na-achọ ihe dị iche? "Were ya n'ụlọ ahụ" ya na onyinye onyinye ụlọ anyị dị ka nke kachasị (3-3 / 4 ″) ma ọ bụ nnukwu (4-3 / 4 ″) medals! Mere nke 100% laser ịkpụ acrylic, na 1/4 ″ oké, anụmanụ ndị a bụ nnukwu na yi. Ederede ederede mara mma na eserese bụ nke ejiri UV inks na-akwalite ọmarịcha ihe oyiyi na agba agba (nke a abụghị ihe mmado dị ọnụ ala !!)
Ihe nrite DCM Decagon wetara ụdị decagon mara mma yana onyonyo ọgbara ọhụụ. Wuru site alloys alloys na a nwa imecha, niile DCM nrite tụọ 2 "na dayameta, na nwere doro anya na agba ihe jupụtara n'ime na-amị a dazzling graphic.
Akụkụ ndị dị n'elu gosipụtara nhọrọ nke ụlọ ọrụ anyị na-eduga nke nrite na egwuregwu na atụmatụ ntụrụndụ. N’ezie, anyị nwere egwuregwu ndị ama ama dịka baseball, basketball, bọọlụ na bọọlụ, mana anyị nwekwara nrite maka ịgba ịnyịnya ígwè, ịgba fenti, isi nri na ihe ndị ọzọ. Ọbụna anyị nwere akara nrịbama, dị ka ọmarịcha ọwa ọkụ anyị na-ewu ewu n'egwuregwu Olympic, nke enwere ike iji mee ihe ọ bụla.